पिसाब फेर्न गाएकी २१ वर्षिय आशाले यस्तो गर्लिन् भन्ने कसैले सोचेका पनि थिएनन्! – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/पिसाब फेर्न गाएकी २१ वर्षिय आशाले यस्तो गर्लिन् भन्ने कसैले सोचेका पनि थिएनन्!
अन्ततः उनिहरु लि भि ङ्ग टु गेदरमा बस्न थाले । केटा उतै रहे आ शा घ र फ र्कनु भयो । नेपाल फर्किए पछि सँगै बस्ने र विवा ह गर्ने कसम खाएका थिए । नेपालमा निषेधाज्ञा तथा विविध कारण लि भिङ्ग टु गेदरमा रहेका साथि फर्किएनन् । आशा नेपाल आए लगत्तै खोटाङ्ग पुग्नु भयो । प्रारम्भिक बयानमा आशाले पहिलो एक महिना मिन्स भएको बताउनु भएको छ ।
त्यस पछि महिनावारी नभएकाले बच्चा भएको शंका लागेर केटालाई फोन गरे पनि वेवास्ता गरेको बताउनु भयो । असार १८ गते शुक्रबार खोटाङ्ग बाट काठमाडौ जान आशा बस चढ्नु भएको थियो । लगातारको बर्षातका कारण खोटाङ्गबाट माम्ति आउन रातको १२ बजिसकेको थियो ।
खाना विचमा खाएर बसमा सबै सु ति रहेका थिए ।माम्तिमा खोलाले बस जान नसक्ने भयो सबै निदाए । विहान ४ बजे आशा उठेर पिसाव फेर्न निस्किईन । धेरै बेर उनि आईनन पनि । बस मालिक सन्तोषी राई पनि सिटमै निदाईरहनु भएको थियो ।